Sakura-Myanmar: သမီးဖတ်ဖို့(၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်-စက်တင်ဘာလ)
Posted by nu-san at 8:53 AM
I prefer girl.
Girls know how to take care of parents.
ညီမဆိုလည်း မိန်းကလေးဘဲ လိုချင်မှာ :D
အစ်မ. ကလေးအကြောင်းလေးတွေ ရေးထားတာ တအားကို ဗဟုသုတလည်း ရပါတယ်။ ကလေးငယ်သေးတော့ တအားစိတ်ပူရတာပဲနော်။ ကျွန်မမှာလည်း သမီးငယ်ငယ်လေး..ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဘွားတွေနဲ့ ထားရတယ်။ ဒီမှာ ကလေးအတွက် အခုလို စီစဉ်ပေးတာတွေ မသိလို့။
ဂျပန်နိုင်ငံက အခုလို အတွေ့အကြုံလေး ရေးထားတာ တွေ့လို့ သဘောကျတာမို့ ကျွန်မဆီမှာ လင့်ခ်လေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါနော်။ (မလင့်ခ် ခင် ခွင့်မတောင်းမိလို့ အဲဒါအတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်လို့)
ခွင့်ပြုတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာပေါ့လို့း)
ညီမတို့ စိတ်ပညာပထမနှစ်မှာ ပီယာဂျေးဆိုတဲ့သူက သူ့သားလေးတွေ အကြောင်း အခုလို မှတ်တမ်းတင်ရင်းနဲ့ ပီယာဂျေးသီအိုရီထုတ်ထားကို လေ့လာရတုန်းက ငါလည်း ကလေးရလို့ကတော့ အဲလိုရေးမယ်လို့ တွေးဖြစ်ပေမယ့် တကယ်ရေးကြည့်တော့ စာကမထွက်ဘူးး)
မနုစံရေးထားတာ ဖတ်ရတော့ တကယ့်ကို မျက်လုံးထဲမြင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ခံစားလာရသလိုမျိုး တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဆေးကုသ၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေပါ ရေးပေးလို့ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘလော့ကို အခုမှသေချာဖတ်မိလို့ နောင်တတောင် ရချင်သလိုပဲ။ တကယ်ပြောတာ။ ကျန်တာတွေ နောက်ရက်တွေ လာဖတ်ဦးမယ်နော်။
(စကားမစပ် ညီမနာမည်ရင်းလည်း နုစံပဲး))))
Anonymous>> Yes, I hope so!!
subuueain>> ဟုတ်တယ် ညီမလေး.. တော်တော်များများ အမေတွေက သမီးလိုချင်ကြပြီး အဖေတွေက သားပိုလိုချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလေးလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီသားပါ ညီမရယ်.. အရာရာ ကံပါပဲ.. :))
လသာည>> သမီးလေးပုံကို ညီမရဲ့ blog မှာ တင်ထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ချစ်စရာလေး။ သမီးလေးက အသက်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဟင်။ ဟုတ်တယ် ညီမရေ.. စိတ်ပူရတယ်။ ငယ်ငယ်ပိစိလေးတုန်းကလည်း ပိစိလေးမို့ နည်းနည်းလေး ကြီးလာတော့လည်း ကြီးလာပြန်လို့ ပူရတယ်နော်.. :)
Kyaw Hnin Se Lwin>> ညီမရေ.. တစိမ့်စိမ့်ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။